Global Voices teny Malagasy » Egypta: Mampiasa ny Twitter ho an’ny fahasalamana tsara kokoa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Septambra 2018 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora, Katroka 7 Miliara
(Marihina fa tamin'ny 13 Desambra 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Azo ampiasaina ve ny Twitter mba hamonjena ain'olona na hanatsarana ny fahasalamany? Nandritra ny fifandonana nitranga tao amin'ny Kianja Tahrir tany Egypta  , nisy kaonty Twitter (@TahrirSupplies ) noforonina mba handaminana ny fizarana ny fitaovam-pitsaboana  any amin'ireo toeram-pitsaboana natsangan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana sy nanodidina ny kianja, ary koa hizarana ny sakafo sy ny zavatra hafa nilaina tao an-toerana. Ny Healthy Egypt Tips kosa tetsy ankilan'izany, dia nanana hetsika hafa avy amin'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo izay nanomboka ny kaonty Twitter (@HealthyEgypt ) tamin'ny volana Aogositra 2011 mba hanaparitahana ny toro-hevitra momba ny fahasalamana tany Egypta.
Ity ny iray tamin'ireo torohevitr'izy ireo:
@HealthyEgypt : Tsara kokoa ny kafe kelikely mielanelana noho ny kafe eran'ny kaopy lehibe iray mba hahamailo sy hifantohana.
Namaly ny fanontanian'olona  ihany koa izy ireo, nanampy ireo fandraisana an-tanan'ny tsirairay , ary nampahafantatra ny momba ny fanabeazana  ara-pananahana  ihany koa izay fanontaniana maha-menatra ao an-toerana  noho ny kolontsaina .
Iza ianareo ary azonareo lazaina bebe kokoa anay ve ny mikasika ny hetsika ataonareo.
Vondrona mpilatsaka an-tsitrapo izahay, nanomboka izany ny vadiko Iman Ismail sy ny tenako Kareem Mossad, ary avy eo dia nanampy namana dokotera iray izahay Dr. Ahmed Ibrahim
Voasoratra ao amin'ny mombamomba anareo fa mizara vaovao azo antoka sy voamarina 100% ianareo. Noho izany dia mila manontany anareo izahay hoe: Dokotera ve ianareo? Ahoana no fomba ahazoanareo torohevitra ara-pahasalamana, manamarina izany, ary mamaly ny fanontanian'ny olona?
Mpikatroka sy mafàna fo momba ny fahasalamana izaho sy ny vadiko. Tsy mpitsabo izahay kanefa efa niasa tao amin'ny sampan-draharaha misahana ny fahasalaman'ny vondrom-piarahamonina nandritra ny fotoana vitsivitsy. Manana fitsipi-pitondrana izahay, momba ny torohevitra ara-pahasalamana omenay ny mpanjohy anay, ary tsy maintsy manamarina izany indroa, amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny loharanom-baovao imbetsaka ao amin'ny tranonkalan'ny fahasalamana malaza, na manamarina izany miaraka amin'i “Ahmed Ibrahim” izay olona fahatelo (dokotera) manampy anay amin'ity hetsika ity.
Moa ve ny kaonty tohanan'ny orinasa ara-barotra na FTMF=ONG? Voamariko ohatra fa indraindray ianareo miresaka anarana marika. Misy hifandraisany amin'izy ireny ve ianareo?
Tsy mbola manana mpanohana ara-barotra na FTMF=ONG aloha izahay. Na izany aza, nahazo tolo-kevitra roa izahay, saingy tsy mbola vonona amin'izany dingana izany izahay.
Hafiriana izay no nanaovanareo fanentanana an-tserasera? Manana fikasana ny hanokatra kaonty hafa ankoatra ny Twitter ve ianareo, toy ny Facebook, bilaogy, sns ?
Nanomboka tamin'ny volana Aogositra izahay, tany amin'ny tapaky ny volana Ramadany tany ho any, ary tena nanaitra ny valintenin'ny mpanjohy, novidianay ny “www.healthyegypt.org  sy www.healthyegypt.net ” ary amin'izao fotoana izao izahay dia ao amin'ny dingana fanomanana fandaharana ho an'ny tranonkalanay mba hahafahanay manomboka tsy ho ela.
Voamarikay ihany koa fa amin'ny teny Anglisy ihany ianareo no misioka? Moa ve ianareo mikasa ny hisioka amin'ny teny Arabo? Tsy mihevitra ve ianareo fa mametra ny mpihaino anareo eto Egypta ny teny Anglisy ?
Tena marina izany, misioka amin'ny teny Arabo izahay indraindray  fa tsy matetika, ary efa ao anatin'ny fandaharanay mihitsy ny tranonkala ho an'ny fiteny roa mba hahafahanay misarika mpitsidika bebe kokoa.
Mahazo domberina  miabo  ihany koa izahay amin'ny alàlan'ny Twitter avy amin'ireo olona maneho  fa tena nanampy betsaka azy ireo ny torohevitra  toy izany ary manentana  azy ireo momba ny lohahevitra tsy sahy resahana izahay. 
Izany no fomba iray ampiasaina ny Twitter mba hampielezana ny fanentanana ara-pahasalamana eo amin'ny fiarahamonina. Raha mahafantatra tetikasa hafa mifandraika amin'ny fahasalamana amin'ny aterineto ianao, azafady mba ampahafantaro anay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/06/125684/
 fifandonana nitranga tao amin'ny Kianja Tahrir tany Egypta: https://globalvoicesonline.org/2011/11/21/egypt-the-revolution-is-back/
 handaminana ny fizarana ny fitaovam-pitsaboana: https://twitter.com/#!/TahrirSupplies/status/142324767456890880
 Namaly ny fanontanian'olona: https://twitter.com/#!/HealthyEgypt/status/119396370401607681
 nanampy ireo fandraisana an-tanan'ny tsirairay: https://twitter.com/#!/HealthyEgypt/status/138588559052505088
 fanontaniana maha-menatra ao an-toerana: https://twitter.com/#!/HealthyEgypt/status/116944046395637761